समयमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा आयोजनाको लागत बढ्यो | News Nepal
>>प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश अाईपुगे
>>९० दिनमा ६८ कानुन बनाउनै पर्ने : अहिलेसम्म कति अाेटा कानुन बने त ?
>>स्वीडेनमाथि जर्मनीकाे जित, नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना
>>चीन भ्रमण सकाएर जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्कंदै
>> प्रधानमन्त्री अाज ल्हासामा : यस्ता छन् कार्यक्रम
समयमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा आयोजनाको लागत बढ्यो
काठमाडौं,२५ फागुन । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा रहेका अधिकांश सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । समयमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र बबई सिचाइ आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गरेको खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । यी आयोजनाले यो वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम खर्च गरेका छन् ।
जग्गा प्राप्तिमा समस्या तथा अन्तर सरकारी निकायका समन्वय अभावका कारण यस्ता आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाका अनुसार भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण बषरैंअघिदेखि सुरु भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा भने यस वर्षका लागि छुट्टाइएको बजेट ८८ करोड ८० लाख ९२ हजार अपुग हुने देखिएको छ ।
‘जग्गा प्राप्ति, प्राविधिक जनशक्तिमा कमी, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव र ठेकेदारहरुको न्यूनस्तरको कार्य सम्पादनका कारण सिँचाइ र नहर निर्माण सम्बन्धित आयोजनाहरु समस्यामा परेका छन् । ‘ बजेटको अर्धबाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत ८ अर्ब ९२ करोडले बढ्यो
यो आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ०४४र०४५ मा शुरु भएको हो । सुरुवातमा आर्थिक वर्ष ०६९र०७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएकोमा अहिले यसको निर्माण सम्पन्न हुने समय नै संशोधन गरिएको छ । अहिले ०७८र०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण सुरु गर्दा ३ अर्ब ७७ करोड लागत आँकलन गरिएकोमा अहिले यसको लागत १२ अर्ब ६९ करोड पुग्ने देखिएको छ । यसको लागत अहिले ८ अर्ब ९२ करोड वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा ७१ करोड ६३ लाख ५५ हजार बिनियोजन गरेकोेमा पुस महिनासम्म १० करोड ७४ लाख ४९ हजार खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस सम्ममा ३१।३२ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा खर्चमा ५१।०३ प्रतिशतले घटेको छ ।
अहिलेसम्म यो आयोजनाले ५५ किमी नहर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै बाढीबाट क्षतीग्रस्त क्षेत्र तथा संरचना तटबन्ध गर्नुपर्ने १४ किमी मध्ये १० किमी मात्रै निर्माण गरेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाले ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
आयोजना निर्माण क्रममा जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै बेलाबेलामा नदीजन्य निर्माण सामाग्री संकलनमा पनि स्थानीयले बाधा उत्पन्न गर्ने गरेका छन् ।
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने योजनासहित यो आयोजनाको निर्माण अघि बढाइएको हो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत मात्रै खर्च
यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख ५९ हजार बिनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ४४ करोड ५३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
गत वर्षको ६ महिनामा बिनियोजित बजेटको ४२।३६ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्षको सोहि अवधिमा २८।०६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आयोजना निर्माण सुरु गर्दा लागत १२ अर्ब ८० करोड अनुमान गरेकोमा अहिलेको संसोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अहिले यसको लागत १२ अर्ब २२ करोडले बढेको छ ।
नहरको अधिकांश क्षेत्र निकुञ्ज तथा बनको क्षेत्रमा परेको र स्थानिय बासिन्दा संग हुने मुआब्जाको विवादका कारण आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको छ ।
यो आयोजनाका लागि अहिलेसम्म १ सय ११।७० हेक्टर जग्गा खरिद भएको छ । र, मुल नहरमा १ सय ३२ वटा स्ट्रक्चर निर्माण गरिएको छ ।
अहिलेसम्ममा सिधानिय शाखाको ३०।८४ किमी नहर निर्माण भएको छ भने डण्डुवा शाखाको हेड वक्र्स निर्माण सम्पन्न भएको छ । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने यसको ५५।८ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
यस आयोजनाको निर्माण ०६२र०६३ देखि सुरु भएको हो । सुरुमा ०७१र०७२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले अहिले ०७६र०७७ मा निर्माण सक्ने योजना बनाइएको छ ।
बाँकेको सिँचाइयोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ यो आयोजना अघि बढेको हो । राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटर बाँध निर्माण गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने आयोजनाको योजना छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ६८ प्रशित भौतिक प्रगति
कैलाली जिल्लामा निर्माणाधीन यो आयोजनाको ६८ प्रतिशत काम सकिएको छ । कर्णाली नदीबाट कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको लागत अहिले १२ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०६४र०६५ मा निर्माण शुरु गर्दा १२ अर्ब ६३ करोड आँकलन गरेकोमा अहिले लागत २ करोड बढेको छ ।
अहिले यो आयोजना ०७५र०७६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निर्माण गर्नुपर्ने ५।८७ किमी नहरमध्ये ३।१ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । र , १ सय १५ किमी कृषि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म १ सय ८ किमी निर्माण सकिएको छ ।
अहिलेसम्म चिसापानीमा इन्टेक तथा लिंक क्यानको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै चिसापानीदेखि बलचौरसम्म मूल नहर तथा सेटलिंग बेसिन निर्माण भएको छ भने कटासेदेखि मोहनासम्म फिडर नहर निर्माण पनि सकिएको छ । अहिले कणरली पथरैया र मोहना नदिहरुमा तटबन्ध निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन भएकोमा ७६ करोड ६६ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ५८।२८ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष विनियोजित बजेटको ३८।९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्च गत वर्षको तुलनमा ७ प्रतिशतले घटेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस आयोजना निर्माणका क्रममा नहर रेखाङ्कनमा परेको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । आयोजनाले वन क्षेत्रका रुखहरु कटान गर्न र अतिक्रमित वस्ती हटाउन सकेको छैन । नहर निर्माणको रेखाङ्कनभित्र परेको मुक्त कमैयाको वस्तीलाई पनि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।
थप बजेट माग गर्ने एकमात्रै सिँचाइ आयोजनामा भेरी बबई डाइभर्सन
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ८८ करोड ८० लाख ९२ हजार विनियोजन भएकोमा पुससम्म ५५ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको ६२।६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अहिले यो आयोजनाको काम तिब्र गतिमा अघि बढेकाले थप रकम आवश्यक भएको देखिएको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।
सुरुङ खन्नका लागि चीनबाट ल्याएको टनेल बोरिंग मेशिन ९टीबीएम ० को प्रयोग भएसँगै निर्माण कार्यमा तिब्रता आएको हो । यस आयोजनाका लागि १२ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ जसमध्ये अहिलेसम्म २ हजार ४ सय मिटर सुरुङ खनिएको छ । यसको अहिले भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने २० प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
सुरुवातमा १२ अर्ब ६३ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले यस्तो लागत १६ अर्ब ४३ करोड लाग्ने आँकलन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८र०६९ मा अघि बढाइएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
अहिले आयोजनाका लागि रुख कटानको काम पनि अघि बढिरहेको छ । बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइका साथै ४८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अघि बढाइएको हो ।
प्रकाशित मिति : 2018-03-09
इकमर्सप्रतिको बढ्दो आकर्षण : एनआइसी एसिया बैंकले ल्यायो डलर क्रेडिट कार्ड
काठमाण्डौं,९ असार । एनआइसी एसिया बैंकले इकमर्सप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई मध्य नजर गर्दै भिजा इन्टरनेशनल युएसडी क्रेडिट कार्ड ल्याएको छ। कार्डमा...
घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
बेनी, म्याग्दी, ८ असार । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति...
पुर्व मिस नेपाल निकिता चण्डकको डेब्यू फिल्म ‘रानीमहल’ को सुटिङ रद्द, २५ प्रतिशत छायांकनमै डेढ करोड झ्वाम !
काठमाडाैं ८, असार । पुर्व मिस नेपाल निकिता चण्डकले डेब्यू गर्न लागेको फिल्म 'रानीमहल’ छायांकन पुरा नगरेर सुटिङ स्थलबाट काठमाडाैं...
मरिच काण्डमा छाला उद्योगी सञ्जय अग्रवाल पक्राउ
वीरगञ्ज, ८ असार । राजश्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँले वीरगञ्जका छाला उद्योगी सञ्जय अग्रवाललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ ।...
विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी
काठमाडौँ ८, असार । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ को खर्च कटौतीसम्बन्धीको छलफलमा शुरु भएको छ ।...
सरकारले राेक्ने भाे गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुको आयात : कस्ता वस्तु राेकिने भए त ?
काठमाडौं,८ असार । सरकारले अब विदेशबाट अायात हुने गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुको रोक्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्वदेमै भएका उध्याे...
राजविराज, ८ असार । जिल्लामा जारी रहेको विद्युत् हुकिङ अभियानअन्तर्गत सप्तरीको विभिन्न ठाउँबाट बिहीबार १६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।...
बेइजिङ, ७ असार। नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा आज सम्झौता सम्पन्न भएका छन्...
मलेसिया प्रकरण पेचिलो बन्दै : अब कहिले जालान् त नेपाली कामदार ?
काठमाडौं,७ असार । अब नेपाल सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता नभएसम्म मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने भएको छ । मलेसियासँग बारम्बार श्रम...
Tweets by @newsnepal105
के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ?
रवि लामिछाने भन्दा देशको कानुन तल छ सरकार ?
द्वन्द्व हैन, एकता र विकास चाहन्छन् रोल्पालीहरु
बाहुनवादका नाममा रोटी खान नपाउनेका लागि….
ग्वाटेमालामा विशाल ज्वालामुखी विष्फोट, घरहरु आगाको लाभासँगै बगे !